Ciidamada Booliska oo Su’aalo Weydiinayo Sedax Qof oo Ka Badbaaday Xusuuqii Mandera – Radio Muqdisho
Ciidamada booliska ayaa su’aalo weydiinayo sedax qof oo ka badbaaday xusuuqii ay xalay maleeyshiyaadka Al-shabaab 36-qof oo shacab ah ugu geysteen goob dhagaxa laga qodo oo ku taalo deegaanka Koromey ee County-ga Mandera.
Ku xigeenka taliyaha booliska ee Mandera Elvis Korir ayaa sheegay in dadkan ka badbaaday xasuuqa ay ka caawinayaan booliska baaritaanada ay wadaan.
Mr Korir ayaa sheegay in su’aalo ay weydiinayaan dadkan ka badbaaday xasuuqa si ay wax badan uga ogaadaan dadkii ka danbeeyay weerarkaasi,isagoo intaasi ku daray in uu rumeysanyahay in kooxaha weerarkan fulisay ay lug uga soo talaabeen xadka uu Kenya la wadaago Soomaaliya,markii ay weerarka fuliyeena dib ugu laabteen dalkooda Soomaaliya.
Mr Korir ayaa intaasi ku daray in dadka la xasuuqay aysan muslimiin ahayn,islamarkaana aysan ka soo jeedin deegaanka.
Warar aan la xaqiijin ayaa sidoo kale sheegaya in la afduubtay qaar ka mid ah shaqaalihii dhagaxa ka qodayay goobtasi.
Weerarkan ayaa noqonaya kii labaad ee ka dhaca magaalada Mandera ee gobolka waqooyi-bari.
22-kii bishii dhamaatay ee November ayey ahayd markii 28-qof lagu dilay bas ka soo baxay magaalada Mandera oo ku soo jeedayay magaalada Nairobi.
Dhinaca kale madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa la filayaa in uu galabta la hadlo shacabka.
Madaxweyne Uhuru ayaa saaka kulan la qaatay golaha amniga ee dalka,waxana uu hada kulan la leeyahay golaha wasiirada.
Wararka qaar ayaa sheegay in laga yaabo in madaxweynaha uu is-bedel ku sameeyn doono saraakiisha ammaanka ee dalka.
Howlo dib u habeyn ah oo lagu sameynayo barxadda dugsiga tababarka Jeneraal Kaahiye "SAWIRRO"